शेखर कोइरालाको आरोप : संसदमा कांग्रेसका भूमिका 'जिरो'
शेखर कोइरालाको आरोप : संसदमा कांग्रेसका भूमिका ‘जिरो’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टीले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली रेडियो नेकटवर्कको लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीमा नेता कोइरालाले भने,‘अहिले मुलुकमा दण्डहिनता बढिरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको पनि गल्ती छ । हामी संसदमा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो, त्यसरी हामी प्रस्तुत हुनु सकेनौं । त्यो त नेपाली कांग्रेसको कमजोरी हो ।’
ऋषि धमलाको कुरा गरेको होईन मैले । सबै मिडियाको कुरा गरेको हो । ऋषि धमलाको मात्रै कुरा होईन । प्रदुषण मापन गर्ने काम गृहमन्त्रीको हो र ? कन्ट्राक्टरलाई समात्ने काम गृहमन्त्रीको हो र ? त्यसको अरु निकायहरु छन् नि । गृहमन्त्रीले गर्नुपर्ने कामहरु अरु छन्, तर उहाँ के मा फसिरहनुभएको छ भने प्रदुषण मापन गर्ने काममा । त्यो पनि मास्क लगाए । प्रधानमन्त्री किन गैरहनुभएको छ जंगी अड्डा ? यो कुरा कसैले सोधेको छ । यो दुई तीन दिनको दौरान तीन पटकसम्म जंगी अड्डा पुग्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्नको लागि । प्रधानन्यायाधीश जंग्गी अड्डा किन जानुभयो ? यो सिरियस कुरा हो । महँगी त बढ्छ । हामीले रोकेर रोकिँदैन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको प्रमाणपत्र : परीक्षा दुईतिर, सिम्बोल नम्बर एउटै
ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव अनुकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान
यात्रुले मजदुरलाई दिए ५ सयको नक्कली नोट : गभर्नर खतिवडाकै हस्ताक्षर